समाचार - किन तपाइँ सEN्क्रमणकारी सामग्री पछि GALVANIZED प्रयोग गर्नु पर्छ?
किन तपाईं सAL्क्रमणकारी सामग्री पछि GALVANIZED प्रयोग गर्नु पर्छ?
तपाईं जस्ती वेल्डेड तार बाड़ खोज्दै हुनुहुन्छ?
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंसँग छनौट छ?
त्यहाँ दुई प्रकारका गेल्वनाइज्ड वेल्डेड तार फेंसिंग सामग्रीहरू छन्: जीबीडब्ल्यू (बुनाई / वेल्डिंग अघि जस्ती) र GAW (बुनाई / वेल्डिंग पछि गल्भेनाइज्ड)। भिजुअरी तिनीहरू धेरै समान देखिन्छन्। तर नजिकबाट हेर्दा, तपाईं भिन्नता देख्न सक्नुहुन्छ। र ती स्थापना भएपछि, समय बित्दै जाँदा फरक थप उल्लेखनीय हुन्छ। कुन चाँहि राम्रो मूल्य हो, लामो समयसम्म चल्नुपर्दछ, अझ सजीलो रूपमा उपलब्ध छ?
GBW वेल्डिंग अघि जस्ती GAW वेल्डिंग अघि जस्ती
वेल्ड पोइन्ट-जिंक हटाइयो
जस्ती तारको किनारबाट बनेको
जलाउनुहोस् - रस्ट र जंगबाट असुरक्षित
पानी र चौराहेमा कुनै संक्षारक संस्थाहरू - बिस्तारै स्टील बाहिर खाँदै सम्पूर्ण समाप्त उत्पाद पग्लिएको जिंकको स्नानको माध्यमबाट कोरिन्छ
तारको छेदनहरू जिंक द्वारा राम्ररी मोहर गरियो
क्षरण र जंगको स्रोतहरूको जोखिमबाट सुरक्षित छ
बिभ नाप र जाल आकारहरूमा उपलब्ध
चिकन वायर मेष / हेक्सागोनल वायर मेष
GBW बुन्नु अघि जस्ती GAW बुन्नु भन्दा पहिले जस्ती
GAW साथ तुलनात्मक आर्थिक र सस्तो जाल
एक मध्यम आजीवन प्रत्याशा
गेज र जाल संयोजनहरूको विस्तृत विविधतामा उपलब्ध छ सम्पूर्ण समाप्त उत्पाद पग्लिएको जिंकको स्नानको माध्यमबाट कोरिन्छ
नुन पानी र ग्रीन हाउस बेंच प्रयोग
GBW एक भन्दा धेरै राम्रो
GAW फेन्सिंग सामग्रीहरू GBW भन्दा धेरै उत्कृष्ट छन्। र ती लामो समय सम्म GBW भन्दा लामो हुनेछ। यसैले तिनीहरू उत्तम विकल्प हो विचार गर्न को लागी जब तपाईं एक जस्ती वेल्डेड तार बाड़ चाहानुहुन्छ। तपाइँको प्रारम्भिक लगानी लागत अधिक छ। तर त्यो तारको विस्तारित जीवनकाल द्वारा अफसेट भन्दा बढी हो। न केवल तपाईं आफ्नो बार बाट प्रयोग को वर्ष प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर पनि तपाईं मर्मत र प्रतिस्थापन को खर्च मा बचत हुनेछ। किन ती निराशा र समस्याहरु को माध्यम ले?
GAW Meshes पनि जनावरको खोरहरूको लागि उत्तम विकल्प हो। भारी गल्भेनाइजिंग मल र मूत्रबाट क्षतिग्रस्त हुनेछ। पिंजरा प्रतिस्थापन को आवश्यकता धेरै कम हुनेछ। एक गुणवत्ता उत्पादन को उच्च प्रारंभिक लागत अन्ततः तपाइँको पैसा बचाउनेछ।
सामान्यतया, GAW उत्पादनहरू पाउन कठिन छ। त्यहाँ केहि फ्याक्ट्रीहरू छन् कि तिनीहरूलाई बेच्नुहोस्, आंशिक रूपमा तिनीहरूको अधिक खर्चको कारण। तर यो उच्च गुणस्तरको वेल्डेड / बुनाई तार फेन्सिंग सामग्रीको लागि मांग धेरै मजबूत छैन। त्यो किनभने धेरैलाई वेल्डे / वीभ पछि गल्भेनाइज्डको बारेमा थाहा छैन र त्यहाँ ठूलो भिन्नता छ।
जब व्यक्तिहरु तार जस्ती छ भन्न को लागी, तिनीहरू सामान्य जेनेरिक GBW उत्पादनहरु को बारे मा सोच्दै छन्। GAW कहिले पनि दिमागमा आउँदैन, यद्यपि उनीहरूले उच्च गुणवत्ताको उत्पादन किन्न रुचाउँदछन्। यो धारणा बनाइएको छ कि तार जस्ती भएकोले, यो वर्षौंसम्म रहनेछ। जहाँसम्म, यदि उनीहरूलाई मात्र थाहा छ भने, उनीहरूले अझ राम्रो केहि खरीद गर्न सक्नेछन् जुन लामो समय सम्म सन्तुष्ट हुनेछ।
पोष्ट समय: डिसेम्बर २ -20 -२०२०